Dr. Tolaa Bariisoo: "Rakkoo qormaata mudaterratti naannolee biraa waliin ejjennoo walfakkaatu qabanneerra" - BBC News Afaan Oromoo
Dr. Tolaa Bariisoo: "Rakkoo qormaata mudaterratti naannolee biraa waliin ejjennoo walfakkaatu qabanneerra"
Itti gaafatamaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo rakkoon bu'aa qorumsa kutaa 12ffaa irratti mul'ate akka furamuuf naannolee biraa waliin ejjennoo walfakkaatu qabanneerra jedhan.
Dr Tolaan bu'aa qorumsaa kutaa 12ffaa baranaa irratti rakkoolee lama hubannee akka sirratu beeksifneerra jedhan.
"Inni jalqabaa gosa barnootaa Aptitude jedhamuun akkaataan qabxiin itti soroorame rakkoo kan qabu ta'uu hubanne. Kana Ejensiin Qormaata Biyyoolessaas dhiifama gaafatee sirreessaa akka jiru himeera."
"Rakkoo inni lammataa barattoonni 5,000 tahan qabxiin isaanii gosa barnootaa sadiin hanga hunda deebisuutti haala itti gahantu mul'ate, kunis 100 fi 99 fa'a. "
Gosoota barnoota sadiin qabxii olaanaa walfakkaataa barattoonni argatan kunneen naannolee biyyattii afur keessatti ta'uus eeran.
Naannoleen afran kunneenis naannoo Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Uummattoota Kibbaafi Oromiyaadha jedhan Dr. Tolaan.
Barattoota 5,000 kana keessaa Naannoo Oromiyaarraa manneen barnootaa sadii keessattis barattoonni 26 akka argamanis ibsaniiru.
Koreen qabxii qormaata 'Aptitude' irra deebiin ilaalu hundaa'e
Naannoon Tigraay qabxii barattoota kutaa 12ffaa irratti komii kaase
Barataa akkuma maqaa isaa caalee argame
Gosoota barnootaa sadeen amma qabxii olaanaan ittiin mul'ate kana osoo bu'aan qorumsaa hin gadhiifamin durattuu odeefannoo argannee Ejensichaaf ibsinee turre jedhan.
"Ejensichi garuu qabxii kana sirreessuu osoo qabuu bu'aasaa gadi lakkise. Wanti Ejemsichi godhe sirriii akka hin taane akka Biiroo Barnoota Oromiyaatti afaaniinis ibsaa turre, kalleessammoo xalayaadhaanis beeksifneerra," jedhan Dr. Tolaan.
Akka biyyaatti Barattoonni 320,000 tahan rakkoo kanaan ala jiraachuufi barattoonni gosa barnootaa sadiin qabxii olaanaa walfakkaatu argatan 5,000 kuni barattoota hafanirratti dhiibbaa guddaa akka uumus himaniiru.
Qabxii barattoota kanaa haquun aangoo Ejensichaa ta'uu himuun, amma rakkoon kun qabatamaan jiraachuun waan barameef Ejensichi sirreefama ni fiudhata jennee amanna jedhan.
Naannolee biyyattii biroo waliin guyyaa kaleessaa ministeera barnootaatti walgahuun mari'atamuu kan himan DrTolaan, naannoleen hunduu gochi kuni dhalootarratti dhiibbaa cimaa waan fiduuf sirraa'uu akka qabu ejjennoo walfakkaaturra geenyeerra jedhan.
Naannoon Tigiraayis qabxii seensa yuunvarsiitii kutaa 12ffaa kana irratti komii akka qaban beeksisanii ture.
Qabxii qormaata barattoota kutaa 10ffaa kan ilaaleenis rakkoon walfakkaatu mul'achuu malaa? jenne kan gaafannefis, rakkoon akkanaa yoo jiraate erga bu'aan qorumsaa gadhiifameen booda barama jedhani.